Xiisad Siyaasadeed oo ka taagan Muqdisho, kadib qabashadii C/raxmaan C/shakuur. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Dec 18, 2017 184 0
Magaalada Muqdisho waxaa ka socoda kulamo ballaaran oo u dhexeeya siyaasiyiin ku heeb ah C.raxmaan C.shakuur oo habeenkii xalay ciidamo katirsan dowladda ay ka qabteen gurigiisa oo ku yaala nawaaxiga hotel Jazeera.
kulamada ayaa lagu gorfeynayaa sida siyaasiyiinta iyo xillibaanada isku heebta ah ay go’aan mideysan uga qaadan lahaayeen duulaanka kaga imaanaya madaxweyne Farmaajo iyo ciidamadiisa.
Inkastoo weli wax war ah aysan kasoo bixin kulamadaas, hadana waxaa la sheegayaa in ugu horeyn ay codsan doonaan siyaasiyiinta in shuruud la’aan lagu sii daayo C.raxmaan C.shakuur oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarka lagu soo qaaday gurigiisa.
5 katirsan ilaaladiisa ayaa lasheegay in xalay lagu dilay is rasaaseyn dhexmartay ciidamada dowladda iyo ilaaladiisa, waxaana xitaa dadka dhaawacan ku jira haweeneyda u dhaxda C.raxmaan C.shakuur, inkastoo aan la hubin.
Lama oga xaalka sida uu ku dambeyn doono, balse falkan ayaa aad looga hadal hayaa xafiisyada dowladda, iyadoona la filan karo iney wax weliba dhacaan.